Rwanda dia mitsangana amin'ny fizahantany afrikanina tarihin'ny filoham-pirenena ao amin'ny WTM
Home » Travel Associations News » Rwanda dia mitsangana amin'ny fizahantany afrikanina tarihin'ny filoham-pirenena ao amin'ny WTM
Kagame-miaraka amin'ny WTA-Team
Nitsangana ho toerana fizahan-tany tsy manam-paharoa any Afrika amin'ny gorila sy ny fiarovana ny natiora miaraka amin'ny fizahan-tany maharitra, i Rwanda dia nahita fandrosoana haingana vokatry ny paikadiny hampivelatra ny fizotran'ny fizahan-tany, fizahan-tany ary fandraisana vahiny izay nahasarika mpitarika lehibe fizahan-tany manerantany amin'ny tsena fitsangatsanganana an'izao tontolo izao. any London.
Miaraka amin'ny fampiharana ny paikady hampiakarana ny portfolio-n'ny fizahan-tany ao amin'ny firenena, ny Rwanda Development Board (RDB) dia mitentina mitentina 1 tapitrisa tapitrisa dolara amerikana amin'ny fizahantany.
Ny filoha Rwanda Andriamatoa Paul Kagame dia nanaporofo ny fahaizany mitarika amin'ny fampandrosoana ny fizahan-tany maharitra any Rwanda amin'ny alàlan'ny World Tour Award (WTA) natolotra azy tamin'ny fanokafana ny World Market Market (WTM) 2017 tany London tamin'ny Alatsinainy tamin'ity herinandro ity.
Ny loka iraisam-pirenena ho an'ny fizahan-tany eran-tany ho an'ny fahitana fahitana 2017 dia nomena ny Lehiben'ny fanjakana Rwanda ho mariky ny fanekena ny fahaizany mitarika amin'ny alàlan'ny politikam-pihavanana, fizahan-tany maharitra, fiarovana ny bibidia, ary fampandrosoana ara-toekarena misarika ny fampiasam-bola amin'ny hotely lehibe, vokatr'izany fihodinana mahavariana izay nahatonga an'i Rwanda hiakatra sy iray amin'ny toerana itodihan'ny mpizahatany eto Afrika.
Ny RDB dia nitondra hazavana, zava-bita maro momba ny fizahan-tany sy fizahan-tany maro toy ny Kigali Convention Center (KCC) ary hotely kintana dimy lehibe tao Kigali izay nosokafana ho an'ny orinasa tamin'ny 2016, taratry ny fampiasam-bola mihoatra ny 300 tapitrisa dolara amerikana.
Vola mitentina 800 tapitrisa dolara amerikana ho an'ny fivezivezena sy ny fotodrafitrasa fizahan-tany no natomboka tamin'ny fividianana fiaramanidina A330 Airbus misy habe roa sy ny fanombohana ny fananganana ny seranam-piaramanidina Bugesera vaovao tamin'ity taona ity.
Ny fiatraikan'ny KCC sy ny fampiasam-bolan'ny hotely dia efa hita amin'ny endrika fivoriambe avo lenta izay natao tao Kigali ary notokanana hatramin'ny taona 2018 sy ireo taona ho avy.
Ny fampiasam-bola amin'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka sy ny fotodrafitrasa amin'ny seranam-piaramanidina dia antenaina hampiakatra bebe kokoa ny dia any Rwanda. Tombanana fa ny isan'ireo mpandeha ao RwandAir dia hiakatra sahabo ho 600,000 voarakitra ao amin'ny 2016 ho lasa iray tapitrisa mahery amin'ny taona 2018 sy 2019. Ny sidina lavitra ho any Azia sy Eoropa dia hamolavola ny rafitry ny mpandeha, ka hahatonga an'i Kigali ho foiben'ny sidina any Atsinanana sy afovoany. Afrika mba hanolotra fotoana fanampiny ho an'ny fijanonana.
Raha ny filazan'ny RDB, ny tsindrona iray tapitrisa dolara dia natao hanomezana ny mpampiasa vola tsy miankina hiroso amin'ny vokatra fizahan-tany vaovao. Mandritra ny Kivu Belt, misy toerana tsy manam-paharoa nofaritana ho fivoaran'ny fizahan-tany ary ny fahafahan'ny fampiasam-bola mihoatra ny 150 tapitrisa dolara amerikana dia vonona ho amin'ny fampandrosoana haingana.
Ny governemanta koa dia nanisy fanavakavahana ny tany ao amin'ny Twin Lakes, akaikin'ny Volkano National Park, izay azo ampiasaina amin'ny famatsiam-bola eo noho eo ihany koa. Raha ny Akagera National Park sy ny Farihin Muhazi dia vonona handray tombony amin'ny fivoaran'ny làlana vaovao, hanafaka ny fisian'ireo tranonkala voafetra akaikin'ny Akagera National Park sy amin'ny Farihy Muhazi.
Ny firaketana ny fizahantany afrikanina vao tsy ela dia mampiseho an'i Rwanda ho iray amin'ireo toerana fizahan-tany haingana dia haingana any Afrika. Ny indostrian'ny fizahantany ao amin'ny firenena dia nanatri-maso fitomboana indroa indroa hafa tamin'ny 2016 tamin'ny taon-dasa.
Miaraka amin'ity tànana ity, ny Birao Fampandrosoana an'i Rwanda dia mieritreritra ny hamadika ny firenena ho toerana fizahan-tany mahafinaritra izay hampiakatra ny vola miditra.
Nandritra izay 15 taona lasa izay dia niaina fitsangatsanganana mahatalanjona i Rwanda, nanjary firenena marin-toerana sy iray amin'ny firenena mampiroborobo ara-toekarena indrindra an'i Afrika.
Manampy azy ny mponina marobe amin'ireo gorilazy an-tendrombohitra eo amin'ny tehezan'ireo volkano Virunga mahatalanjona, Rwanda koa dia lasa toeran-tsoa fizahan-tany mahafinaritra sy mahaliana.
Ny marketing azy amin'ny maha-"Tany misy havoana an'arivony", ny mponina gorila ao Rwanda ary ny toetrany madio dia manome traikefa ny fahasamihafana manankarena amin'ireo manintona azy.
Safira mitsangatsangana Gorila, kolontsaina manankarena amin'ny vahoaka Rwandese, toerana mahafinaritra ary tontolo iainana fampiasam-bola mpizaha tany any Rwanda no nahatonga an'ity firenena Afrikana ity ho toerana tsara indrindra sy manintona an'ireo mpanao vakansy manerantany.
Ny fandraisan'anjaran'i Rwanda tamin'ny tsenan'ny World Travel Market (WTM) dia nanokatra sy nanome aingam-panahy bebe kokoa ireo mpandray anjara lehibe amin'ny fizahan-tany hitsidika ity firenena ity sy ireo toeran'ireo faritra atsinanan'ny Afrika Atsinanana (EAC).
Miaraka amin'ny fitomboan'ny isan'ny mpitsidika manerana an'izao tontolo izao, Rwanda dia tsena mipoitra ho an'ny fivoriana avo lenta, famporisihana, fihaonambe, hetsika ary fampirantiana (MICE). Ny seha-pihariana MICE dia antenaina hahazoana ity toerana afrikanina ity sahabo ho 64 tapitrisa dolara amerikana amin'ity taona ity, raha oharina amin'ny 47 tapitrisa dolara amerikana noraketiny tamin'ny taon-dasa.
Rwanda no ho tonga firenena mitarika ao Afrika Atsinanana, manintona kaonferansa rezionaly sy manerantany ao an-drenivohitr'i Kigali. Fihaonambe isam-paritra sy iraisampirenena mihoatra ny 30 no kasaina hatao any Kigali alohan'ny faran'ity taona ity.
Ny filohan'i Rwanda Paul Kagame dia nahazo ny loka iraisam-pirenena momba ny fizahantany tamin'ny fanokafana ny World Travel Market 2017 natao tany London. Ny loka dia fankasitrahana ny fahitany fahaiza-mitarika amin'ny fizahan-tany maharitra, fiarovana ny bibidia ary ny fizahan-tany fizahan-tany.
Ny filoha Kagame dia nampiseho fanoloran-tena lehibe sy manokana amin'ny fiarovana, fampiasam-bola amin'ny fotodrafitrasa miaraka amin'ny politika ara-toekarena izay nahatonga an'i Rwanda ho toerana mahaliana ho an'ireo mpitsidika sy mpampiasa vola.
Raha niresaka tao amin'ny tsenan'ny World Travel vao nifarana i Kagame dia nilaza i Rwanda fa miasa mba hampitombo ny fifandraisana amin'ireo olona eran'izao tontolo izao mba hametrahana ny fireneny amin'ny toerana iray amin'ny toerana itodiana any Afrika.
"Izahay koa dia mahita fomba hampitomboana ny fifandraisan'i Rwanda amin'izao tontolo izao izay soloin'ity loka ity," hoy izy.
Ny fizotry ny fanokafana ny firenena, hoy izy, dia averina ihany koa manerana an'i Afrika. "Ity dia tantara iray izay haverimberina manerana ny kaontinanta satria ny Afrikanina dia mandray andraikitra bebe kokoa amin'ny hoavintsika," hoy izy nanampy.
Nilaza ihany koa ny Filoham-pirenena fa ny ezaka fizahan-tany maharitra dia nahitana ampahany betsaka amin'ny Rwandais izay miaro ny tontolo iainana ary koa mampiasa vola amin'ny fotodrafitrasa ilaina hampitombo ny sehatry ny fizahantany.
"Niasa mafy izahay hiaro ny tontolo iainana voajanahary ary eo am-pananganana fotodrafitrasa ho an'ireo mpitsidika sy olom-pirenena," hoy izy nanamarika.
Ny fomba fanao hafa izay ampiasaina amin'ny fanambinana iraisana dia misy ny tetika fizarana fidiram-bola izay ahazoan'ny vondron'olona monina manodidina ny valan-javaboary Rwanda ny isanjaton'ny karama fizahan-tany.
"Ireo vokatra tsara ireo dia nanjary satria ny Rwandaana dia nanao fiovan'ny toe-tsaina avy amin'ny fiankinan-doha amin'ny fahamendrehana sy ny fizakan-tena. Izany no antony, ohatra, ny mpihaza taloha dia lasa mpiaro ny bibidia indrindra indrindra ”, hoy i Kagame tany London.